Shirkada SAAB oo kacday | Somaliska
Shirkada baabuurta sameysa ee SAAB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) ayaa ku dhawaaqday in ay kacday iyada oo dalbatay waxa loo yaqaan Difaaca Musalifka (konkurs) taasoo keeneysa in dowladu ay la wareegto dhamaan hantida shirkada si looga dhiibo daymaha lagu leeyahay.
Shirkada SAAB ayaa mudo 2 sano ah waxay isku dayaysay in ay ka fogaato in aysan dhicin arinta maanta dhacday balse waa laga fursan waayay ka dib markii ay dhiibi waayeen xitaa mushaarkii shaqaalaha. Dhibaatada ku timid SAAB ayaa macnaheedu yahay in 3,000 oo qof oo ka shaqeyn jirtay warshadaha shirkada ee magaalada Trollhättan ay shaqo beelayaan.
SAAB ayay ugu dambeysay baabuur ay soo saarto bishii April markaasoo ay dhacday in ay bixin waayeen lacagtii lagu soo iibin lahaa qalabka laga sameeyo baabuurta. Shirkada Saab ayaa la aasaasay sanadkii 1937. Shirkada weyn ee SAAB ayaa ah dhowr nuuc oo u kala baxda qeybta milatariga oo iyada aan waxba iska badalin iyo qaybta baabuurta oo ah mida kacday.
Sanadkii 1990 ayaa SAAB waxaa iibsaday shirkada maraykanka ah ee lagu magacaabo General Motors taasoo ka iibisay sanadkii 2010 shirkada laga leeyahay Holland ee Spiker. Si kastaba ha ahaatee, ilaa 2010 SAAB caga kuma taagneyn oo waxay raadinayeen cid iibsata. Dhowr shirkadood oo Shiinaha laga leeyahay ayaa isku dayay in ay iibsadaan taasoo ay diiday shirkada maraykanka ee GM oo haysata sirta farsamada baabuurta SAAB.
Ugu dambeyntii, maxkamada Vänersborg ayaa go’aan ka gaareysa in Saab ay kacday taasoo keeneysa in shaqaalaha mushaarkooda ay bixiso dowlada bisha November iyo December.
Viva Somaliweyn says:
December 20, 2011 at 06:59